Ukulungiselela iTefaq - Isikole soLimi se-BLI eCanada
UKULUNGISELELA UVIVIYOIKHOLO LOKUFUNDA
UKULUNGISELELA UVIVIYOIKHALENDA LOKULUNGISELELA ISIFUNDO
ILe Test d'Évaluation de Français pour l'accès au Québec (TEFaQ) isivivinyo esijwayelekile saseFrance esihlose ukukala izinga lolwazi nekhono lomuntu okhethiwe kulolo limi. Yinguqulo ye-TEF eyaziwa yi-Quebec Ministry for Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) futhi ibalulekile kwisicelo esisemthethweni sabokufika.
Isifundo sokulungiselela se-BLI sika TEFAQ sigxile ekusizeni wena ukuthuthukisa amakhono owadingayo ukuze uphumelele kumamojula wokukhuluma nokulalela esivivinyo. Uzosebenzela ukufeza ukushelela nokunemba, wandise isilulumagama sakho futhi uthuthukise amakhono akho okulalela. Ekupheleni kwenkambo uzofinyelela ezingeni le-CEFR B2 noma ngaphezulu.
Uhlelo lwethu luhlukaniswe ngamamojula ama-4 aqukethe amasonto ayi-12 lilinye.
UMsombuluko - uLwesine
6: 00 pm kuya ku-9: 00 pm
I-9: 00 am to 4: 00 pm
I-Module 1 $ 1950
I-Module 2 $ 1950
I-Module 3 $ 1950
I-Module 4 $ 2450
Imali ekhokhelwa ukuhlolwa kwe-TEFAQ (Isikhathi esisodwa: Lapho iqeda iModyuli 4)
12 Abafundi bakaMax
Abafundi abangu-6 uMax
Sinikeza izifundo zamazinga ahlukile.
Thola amaphuzu aphumelelayo lapho uthatha isivivinyo se-IELTS.
Thola amaphuzu aphumelelayo lapho uthatha isivivinyo se-TEFaQ.
Thola ikilasi lalowo nalowo nothisha bethu abaqeqeshiwe.